Ogaden News Agency (ONA) – Maxkamad Amartay In Madaxwaynaha K/Africa Xilka Laga Qaado.
Maxkamad Amartay In Madaxwaynaha K/Africa Xilka Laga Qaado.
Posted by Dayr	/ December 30, 2017
Maxkamada dastuuriga ah ee dalka Koonfur Afrika ayaa shalay xukuntay in baarlamaanka dalkaas ay waajibaadkooda gudan waayeen, waxayna maxkamadu baarlamaanka ku amartay in uu bilaabo hab raaca xilka looga qaadi lahaa madaxweynaha dalkaas Jacob Zuma oo loo heysto dacwado musuqmaasuq.
Dacwada waxaa maxkamada geeyay xisbiyada mucaaradka oo dhawr jeer isku dayay in ay madaxweynaha kalsoonida kala laabtaan, balse waxaa ka tiro batay xildhibaanada xisbiga talada haya ee ANC oo aqlabiyad ku leh baarlamaanka.
Garsooraha maxkamada oo lagu magacaabo Chris Jafta ayaa sheegay in aysan maxkamada awood u lahayn in ay baarlamaanka u yeedhiso qaabka uu noqonayo habraaca, iyo in ay ku qasabto in madaxweynaha xilka laga qaado, maadaama aysan awoodaas lahayn.
Xaakimka guud ee maxkamada Mogoeng Mogoeng oo isagu kasoo horjeedsaday xukunka, ayna ka tiro bateen codadka garsoorayaasha kale ee maxkamada la fadhiya ayaa xukunka ku tilmaamay “garsoor xadkiisii latalaabay”.
Illaa $15 milyan oo doolar lacag gaadhaysa oo ay dowladda leedahay ayaa la sheegay in loo isticmaalay dayactirka iyo naashnaashida guri uu Zuma ku leeyahay tuuladii uu ku dhashay ee Nkandala.
Bishii maarso ee 2016-ka, maxkamadan ayaa sidoo kale xukuntay in Zuma uu dib u mago qeyb ka mid ah lacagtii dowlada ee guriga lagu isticmaalay, wuxuuna madaxweynaha dib u bixiyay lacag dhan $631,000. Zuma ayay mudo xileedka kaga egtahay sanadka 2019-ka.
Inkasta oo uu marar badan oo hore ku guuleystay dacwado maxkamado la hor keenay, hadane waxaa aad usoo kordhaya xukumada lidka ku ah ee ay maxkamadaha gaadhayaan, bishan labo dacwadood oo musuq ah ayaa looga guuleystay hal maalin gudaheed.